Aha! Jokes, Satire » အော် ပ ရေ တာ ဘလက် (၄)…။	39
ကူမားရ် says: နာ့အကို ရေးတာတွေဖတ်ပြီး သတင်းစာ face book ဘာမှကြည့်စမလိုအောင် ပြည့်စုံတယ်
•*¨နန်းတော်ရာသူ •*¨ says: ယွန်းမီမီ​ကျော်​နဲ့နိုင်းဝမ်းက ဘာ​ဒေတုန်း အ​ဆော်​တိုလားမင်းသမီးလား
ခင်ဇော် says: နိုင်းး ဝမ်းး နဲ့ ယွန်းးမီ ပေ့ခ်ျ ကို ညလုံးးပေါက်လည်လိုက်တာ
မွသဲ ( 17082011 ) says: ဟယ်ဘာဒေလဲပြောပါအုံး
ခင်ဇော် says: ဂလိုလေ။
Mr. MarGa says: ရေရေရာရာမဟုတ်ဘဲ ရိုးတိုးရိပ်တိပ်ပဲ သိတာတွေ အတော်များနေပြီ
naywoon ni says: ​ဟေ့ လူဂျီးဘက်​ နိုင်​ငံ​ရေး အ​ကြောင်း​တွေ သိပ်​မသိချင်​ဘူးဗျ။ ခု​လော​လောဆယ်​ ကျုပ်​ စဉ်းစား​နေတာက “အမျိုးသား ပညာ​ရေး ဥပ​ဒေ” ပြီးရင်​ အမျိုးသား ကျန်းမာ​ရေး ဥပ​ဒေ ” လာဦးမလားလို့ ။ ​နောက်​ပြီး ခုတစ်​​လော ဆူညံသံ​တွေ သိပ်​များ ​နေတယ်​ဗျ ။ ကား​တွေက ဟွန်းရှည်​တီးတာတို့ ညနက်​သန်း​ခေါင်​ မီးရထား ဥသြ ဆွဲတာတို့ ။ အလှူမင်္ဂလာ​ဆောင်​​တွေမှာ အသံချဲ့စက်​ ညလုံး​ပေါက်​ နီးပါးဖွင့်​တာတို့ ။ ” ပတ်​၀န်းကျင်​ ဆူညံသံ ထိမ်းချုပ်​​ရေး ” ဥပ​ဒေ ဆွဲပြီး လွှတ်​​တော်​တင်​ရင်​​ကောင်းမလားလို့ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 14409
kai says: Hate မလိုတမာမုန်းတီးမှုကိုတားမြစ်တဲ့ဥပဒေမျိုး..ကတော့.. မြန်မာပြည်မယ်အရေးပေါ်ကို.. ထုတ်ဖို့လိုနေပြီလို့ထင်တယ်..။
…တော်ပါပြီ. ပြောကာမှပိုမလိုတမာလုပ်နေမှ… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 4150
မွသဲ ( 17082011 ) says: နန်းတော်ရာသူဖုန်းသဒင်းလေး အကျယ်ချဲ့ပေးပါ အော်ပလေတာရီးချင့်
တောင်ပေါ်သား says: ဟိုက်ရှားစ်လဘား
အဲဒီ သဉ္ဇာ ဆိုတဲ့နာမည်ကို ဆက်တိုင်းဘဝ မကြားရလိုသူပါ ကျုပ် သိချင်တာက ဒီမနက် နွယ် ဘာလို့ ရုံးမတက်တာလဲ ဟင် ?
တောင်ပေါ်သား says: ဘယ်ရမတုန်းဗျ
နေမကောင်းလို့ပါ တဲ့ ၊ ညနေသွားရဦးမယ် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1064
ဗုံဗုံ says: အက်​ဘလူး နီနီခွင်​​ဇော်​ဆိုတာ
တင်​ဆက်​​ပေးဖို့ ​တောင်းဆိုပါဒယ်​ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12373
ခင်ဇော် says: အဲ့ ကျော်ကျော်ပိုင်မှူး ခုမကြိုက်တော့ဝူးးး
ဗုံဗုံ says: ဟွန်း ပြင်းထန်​ချက်​က​တော့
​ဖောင်​ပြင်​ရင်​​ရော ကြိုက်​မာလား Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12373
ခင်ဇော် says: ပြောင်တာဆိုရင်…….
Wow says: ငင်… နာဆက်ပီးသဒင်းပေးလိုက်မိတာဂိုးးးး
pooch says: စုံပလုံကို စိနေတာပဲ
Alinsett@Maung Thura says: အောင်တံခွန် ၃ သင်္ဘောနစ်တဲ့ အကြောင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး.. နောက် တက်လာတဲ့ သတင်းထဲ…စိတ်ထဲ ခုလုခုလု ဖြစ်သွားစေတာလေးက… ဒီမှာ… ———
ခင်ဇော် says: ဇွန်သင်ဇာ ကိစ္စကတော့ ထုံးစံ အတိုင်း ၂ ဖွဲ့ ကွဲပြန်ပြီဗျာ။
မွသဲ ( 17082011 ) says: ပီထောင်စုညန်မာနိုင်ဂွဒေါ်သန်းမဂျီးမှ နိုင်ဂံဒဂါအဆင့်မှီ ဖင်ပြောင်များအားစကော်လာပေးနေတီဆို ဒန်ဒန့်ဒန်
ခင်ဇော် says: ပြောင်တာချင်း တူလို့ ပေးတယ် ဆိုရင်
black chaw says: @ မွသဲ ၊ ခင်ဇော် ;
Mike says: . လောက်ကိုင် ဒေသမှာ စစ်ဆင်ရေးလုပ်နေတဲ့ တပ်မမှူး သုံးဦးကို
.လက်ရှိရာထူးတွေက ဖယ်ရှားလိုက်တဲ့ သတင်း ကြားရတော့ အဲ့သုံးဦးစလုံး ပျော်နေကြမှာမြင်ယောင်ပါရဲ့ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 7169
Mike says: .နောက်..တရုတ်ကြီး ကျေနပ်အောင်အရေးယူပြတာနေမှာဗျ
လုံမလေးမွန်မွန် says: မသစ်က ပြောထားတယ်.. သူက ပွဲတက်ဝတ်စုံပါတဲ့.. အကျီင်္တွေအမျိုးမျိုးရှိတယ်တဲ့.. အိမ်နေရင်းဝတ်စုံ..ညအိပ်ဝတ်စုံ.. အဲဒီထဲကမှ ပွဲတက်ဝတ်စုံဆိုတာ အမြတ်တနိုးထားပြီး ပွဲရှိမှ ထုတ်ဝတ်တာတဲ့.. သူကတော့ ပွဲတက်ဝတ်စုံပါတဲ့.. မိန်းမတစ်ယောက် သိပ်တော်နေရင် အိမ်ထောင်ကွဲလည်း ဘာမှမဖြစ်ဘူး ထင်ပါကြောင်း.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 4150